थ्रिस्टार मंगोलियामा अभ्यास गर्दै | Hamro Khelkud
थ्रिस्टार मंगोलियामा अभ्यास गर्दै
बिहीबार, भदौ २, २०७३
नेपालको राष्ट्रिय लिग च्याम्पियन रुस्लान थ्रिस्टार क्लब ए.एफ.सी कपको प्लेअफ छनोट खेलका लागी यतिबेला मंगोलियामा रहेको छ ।
टोलीले बिहीबारबाट अभ्यास थालेको छ । बुधबारबाटै अभ्यास थाल्ने भनेपनि बिहीबारबाट मात्र अभ्यास सुरु भएको टिम म्यानेजर कृष्ण अवालेले जानकारी दिए र्। हामी बुधबार मात्र उलानबटार आइपुग्यौ , उनले भने , बुधबार सबै खेलाडी निरन्तर विमानको यात्राका कारण थाकेकाले बिहीबारबाट मात्र अभ्यास सुरु ग¥यौँ ।
लगातारको यात्राका कारण थकाइले गर्दा बुधबार दिउँसो टोलीले अभ्यास नभएपनि बिहीबारबाट अभ्यास सुरु भएको टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले जानकारी दिए । मंगोलियाको स्थानिय समय अनुसार बिहीबार विहान साढे १० बजेबाट दिउँसो १ बजेसम्म अभ्यास भएको छ ।
थ्रिस्टारको टोलीले मंगोलियन फुटबल फेडेरेसनको कृत्रिम मैदानमा अम्यास गरेको छ र्। हामीले ग्राउण्ड फिलिङका लागी हल्का अभ्यास गराएका हौँ , प्रशिक्षक रबीन्द्र सिलाकारले भने र्, नेपालको भन्दा मौसम फरक खाले भएकाले दौडीदै जाँदा छाती गरुङ्गो जस्तो , स्वासमा समस्या आए जस्तो हुँदो रहेछ । उनका अनुसार चर्को घाम लागेको जस्तो देखीएपनि चिसो हावा लागीरहेको छ ।
टोली बुधबार दिउँसो मात्र मंगोलिया आइपुगेको हो । मंगलबार राती त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट हिडेको टोली बुधबार मंगोलियन समय अनुसार साढे १२ बजे मंगोलियाको राजधानी उलानबटार पुगेको हो । कोरियन एयरको विमानबाट सुरुमा दक्षिण कोरियाको इन्चोन हुँदै त्यही एयरको अर्को विमानबाट उलानबटार टोली पुगेको हो ।
आउने ५ भदौबाट राजधानी उलनबटारमा हुने ए.एफ.सी कपको प्लेअफ छनोटमा खेल्नका लागी थ्रिस्टारको टोलीमा १९ जना खेलाडी , १ जना टिम म्यानेजर , २ जना प्रशिक्षक , १ फिजियो र ७ जना अफिसीयल सहितको ३१ सदस्यीय टोली छ ।
ललितपुरको रैथाने क्लब थ्रिस्टारले यो प्रतियोगिताको प्रारंभिक छनौटमा आयोजक मंगोलियाको एर्चिम फुटबल क्बल र कम्बोडियाको नागावोल्र्ड फुटबल क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
एर्चिम थ्रिस्टारका लागी नौलो प्रतिद्धन्द्धि होइन् , यी दुई टिमको प्रेसिडेन्ट कप फुटबलमा भेट भइसकेको छ । नागाबल्र्ड भने नौलो प्रतिद्धन्द्धि हो । एर्चिम मंगोलियन राष्ट्रिय लिग च्याम्पियन हो । यस्तै कम्बोडियन नागावल्र्डले त्यहाँको लिग च्याम्पियन क्लब म्याच फिक्सिङमा परेपछि दोस्रो स्थानमा रहेको क्लबले मौका पाएको हो ।
नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै ए.एफ.सी. कप खेल्ने यस रुस्लान थ्री स्टार क्लब नै पहिलो टोलि हो । छनौट प्रतियोगितामा थ्री स्टार क्लब समूह ‘बि’मा परेको छ। थ्री स्टारले ५ भदौमा आयोजक एर्चिमको सामना गर्नेछ । यसैैगरी एक दिनको विश्रामपछि ७ भदौमा भने थ्रिस्टारले नागावोर्ल्डसँग खेल्नेछ । तीन समूहमा विभाजन गरिएको प्लेअफ छनोट चरणमा नौ टोलीको सहभागिता रहेको छ। तीनै समूहबाट समूह विजेता अर्को चरणमा पुग्नेछ ।
गएको साल भुकम्प र नाकाबन्दिका कारण राष्ट्रिय लिग भएको थिएन । थ्री स्टार २०७१ सालको राष्ट्रिय लिगको विजेताको हैसियतमा मंगोलिया जान लागेको हो । एशियाली फुटबल महासंघ एएफसीले प्रेसिडेन्ट कप हटाएपछि नेपाली क्लबका लागी अर्को मौका एएफसी कप हुन पुगेको छ । विगतमा ए.एफ.सी प्रेसिडेन्ट्स कपको अन्तिम चरणमा दुई पटक प्रवेश गरिसकेको थ्री स्टार क्लब नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै ए.एफ.सी. कप खेल्ने पहिलो टोली हो ।
कम तयारी राम्रो नतिजा
ढिलो तयारी थालेपनि खेलाडीहरुले राम्रो मेहेनत गरिरहेको प्रम’ख प्रशिक्षक मेघराज केसीले स्पष्ट पारे र्। १ महिना अघिदेखी तयारी गरिरहेको क्लबका लागी ए.एफ.सी कप जस्तो प्रतियोगितालाई भने आवश्यक तयारी नपुगेको उनको तर्क छ । यद्यपी जुन स्टान्डर्डको टुर्नामेन्ट हो एएफसी कप त्यस अनुसारको हाम्रो तयारी चाही पुगेको छैन , प्रशिक्षक केसीले राजधानीसँग भने , तैपनी १ महिनामा खेलाडीहरुको मेहेनत राम्रो छ , नतिजा सकारात्मक हुन सक्छ । २ वर्षदेखी नेपालमा फुटबलको माहोल नै नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले एएफसी कप फुटबललले उत्साह थपेको बताए । उनले एर्चिम र नागावल्र्डमा पनि फ’टबलको खासै धेरै माहोल नभएकाले नेपालका लागी त्यत्ति गा¥हो नहुने बताए । कप्तान निराजन खड्का पनि दुबै खेल जितेर थ्रिस्टार अगाडी बढ्नेमा उत्साही छन् र्। हामी जित्न सक्छौ , एर्चिम र नागाबल्र्ड त्यत्ति बलिया छैनन् , उनले भने हामीले उनीहरुलाई हराउन सक्छौँ ।
एएफसी कप छनौट खेल्ने थ्रिस्टारका खेलाडीहरूमा ,एलेन न्यौपाने, बिनय श्रेष्ठ र अविशेक बराल गोलरक्षक छन् । यसैगरी रञ्जित धिमाल, देवेन्द्र तामाङ, पिटर सेगुन, विजय धिमाल, सरोज दाहाल, विष्णु सुनार डिफेन्डर छन् । त्यसैगरी बिक्रम लामा, निराजन खड्का, प्रकाश बुढाथोकी, सुनिल बल, विजय गुरुङ, विष्णु गुरुङ मिडफिल्डर छन् । फरवार्डमा बुद्ध राज लिम्बु (चेम्जोङ), असिम जंग कार्की, रोशन मल र मार्टिन्स कायोडे अजायी रहेका छन् ।
यससँगै फोटोहरु पनि छ । तस्वीर ः एनएसजेएफ